Wuxi Lead Precision Machines dia manolotra fitaovana maro isan-karazany ho an'ny faritra fanaonao: aliminioma, vy, vy vy, titanium, varahina, varahina, varahina, plastika ary fitaovana maro hafa.
Izahay dia manamboatra am-pireharehana ny prototype sy ny faritra famokarana voafetra ary ny fivoriambe ho an'ny indostria isan-karazany. Wuxi Lead Precision Machines dia namokatra singa ho an'ny orinasa amin'ireto orinasa manaraka ireto
Raha manana milina titanium mila milina ianao dia iray amin'ireo loharanom-pahalalana mahomby sy mora vidy indrindra.
Ny serivisy metaly fanaovanay manokana dia manolotra vahaolana mahomby sy an-dàlana ho an'ny filanao famokarana. Manana haingam-pandeha haingam-pandeha isika, ny toetoetran'ny fitaovana fanamboarana metaly kanto izay mifanaraka indrindra amin'ny famokarana ampahany metaly mateza sy farany ampiasaina miverimberina
Raha manana milina plastika mila milina na bobongolo ianao, dia iray amin'ireo loharanom-pahalalana mahomby indrindra izahay ary afaka mamita tsara ny asa.
Raha manana masinina vita amin'ny varahina ianao dia mila milina, izahay dia iray amin'ireo loharanom-pahalalana mahomby indrindra ary afaka mamita tsara ny asa izahay.
Ny fitsaboana amin'ny alalàn'ny tany dia ny sehatry ny atiny substrate hamorona sosona miaraka amin'ny matrikan'ny toetra mekanika, ara-batana ary simika an'ny sosona ambonin'ny fizotrany.